Factory ribbon - mpanamboatra sy mpamatsy ribbonina China
Ny kofehy dia be mpampiasa amin'ny ampahany medaly. Ny tadivavarana dia azo omena amin'ny fitaovana samihafa toy ny polyester, ny hafanana, ny tenona, nylon ary sns.Miankina amin'ny safidin'ny mpanjifa sy ny fomba hanehoana ny sary famantarana. Raha manana loko manjavozavo ny logo, ny lanyard nafindra hafanana dia nisafidy indrindra tsy noho ny vidin'ny fifaninanana, fa koa ny amboniny malefaka kokoa. Ny sary famantarana amin'ny lanyard polyester dia matetika fanontana silkscreen na fanontana CMYK. Ny lanyard tenona na nylon dia matetika tsy voafidy raha jerena ny vidiny ankapobeny. Ny haben'ny fenitra tadivavarana dia 800mm ~ 900mm. Indraindray aleon'ny mpanjifa lava kokoa, ekena izy ireo. Afa-tsy ny fampiasa amin'ny fantsom-pitaovana sy ny sary famantarana azy, ny lafiny iray lehibe amin'ny ribbon dia ny kalitaon'ny fanjairana. Raha te hifandray amin'ireo medaly dia mety ho V nozazaina na N nozazaina. H manjaitra dia tsy mila ny kojakoja vy, raha ny V manjaitra kosa mila ny peratra tadin-tànana sy ny peratra hitsambikina hampifandray ireo tadiny sy medaly. Ny kalitaon'ny fanjairanay dia vita amin'ny alàlan'ny mpiasa efa za-draharaha, izay afaka miantoka ny kalitaon'ny fanjairana ambony. Amin'ny maha-mpanome fanomezana fampiroboroboana matihanina dia azontsika atao ny manolotra ireo vokatra napetraka ao anatin'izany ny fonosana. Tsy maninona ny mampifandray anay hividy ribbon fotsiny na hividy ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny medaly dia samy raisina an-tanan-droa. Eto izahay hiandry ny fanontanianao.